Sarudzo yezvinyorwa zviripo
Ongororo dzenhau dziripo
Mabhuku matatu akanakisa akanyorwa naJuan Carlos Onetti
Asingatsva Juan Carlos Onetti, pamwe naMario Benedetti naEduardo Galeano, vanoumba zvinyorwa zvinyorwa kubva kuUruguay yavo yakajairika kuenda kuOlympus yetsamba muSpanish. Nekuti pakati pevatatu vanovhara zvese, chero mhando muprose, vhesi kana padanho. Kunyangwe yega yega ichipa izvo ...
MuZhizha, naKarl Ove Knausgård
Nyaya yehupenyu mukutenderera kwayo kwemwaka inotaridza kupinda nekubuda kwechiitiko chechimwe nechimwe. Kare, kuberekwa muchando kwakanga kwakaoma nokuda kwokurarama. Nhasi haisati iri yechokwadi anecdote iyo, yakapihwa kuedza kwaKarl Ove Knausgard ...
Kune uya akandimirira akagara pasi murima, naAntonio Lobo Antunes
Iko kukanganwa kune kunakidza kwekukanganwa kunyangwe yako pachako kuratidzira senzira yekuzvidzivirira, uko munhu anozivisa rudzi irworwo rwakafananidzwa soliloquies semifungo inopfuudzwa kune kwedu kuratidzwa. Ndiyo dudziro yakaoma kwazvo pamberi pedu pekutarisa. Zvingave izvo, ...
Mwoyo weTriana, naPajtim Statovci
Chinhu pamusoro peyakakurumbira uye kunyange nenziyo Triana nharaunda haisi kuenda. Kunyangwe zita racho richinongedzera kune chimwe chinhu chakafanana. Muchokwadi, akakwegura Pajtim Statovci anogona kusatombo funga kusangana kwakadaro. Mwoyo waTriana unonongedzera kune chimwe chinhu chakasiyana kwazvo, kune chinoshanduka nhengo, kune icho icho, ...
Ini ndichave ndega uye ndisina pati, naSara Barquinero
Ichokwadi kuti zvinonetsa kuwana manzwi matsva anotaura nezverudo rwakadzika midzi mukukosha, nefilosofi, nekutapudza kubva pakubata kweganda kana kunyangwe kubva kunhengo yemuviri. Uye kuti nyaya iyi inyaya yakazara yekurwisa apo munyori kana munyori ari pabasa anogona kuratidza, kana zvisiri ...
Iyo Martin Mhuri, naDavid Foenkinos
Kunyangwe sekuzvishandura kwazvakaita senhoroondo yenguva dzose, isu tatoziva kuti David Foenkinos haasi kutsvaga tsika kana hukama hwepakati pemhuri mukutsvaga zvakavanzika kana mativi erima. Nekuti iye anotozivikanwa pasi rose munyori weFrance ndiyezve chiremba wechiremba wetsamba muchimiro uye ...
Mabhuku matatu akanakisa naEmil Cioran
Hapana munhu ane tariro yakakwana anosvika makumi masere nemana, sezvakange zvakaita kuna Cioran. Ini ndinotaura izvi nekuda kwekutsunga kuratidza uyu munyori semunhu anokoshesa chiNihilist uyo kushaya hanya uye kutya kwehupenyu kunoumba chimiro uye zvinhu zvinorondedzerwa zvinoenderana nekutongwa kwehupenyu. ...
Hupenyu pane dzimwe nguva, naJuan José Millás
MuJuan José Millás hunyanzvi hunowanikwa kare kubva mumusoro webhuku idzva rega rega. Pane ino chiitiko, «La vida a unas» zvinoita sekutirevudzira isu kukamurwa kwenguva yedu, kune shanduko dzenzvimbo pakati pemufaro nekusuwa, kune ndangariro dzinoumba iyo firimu yatinogona ...